YONKE IMITHETHO, IMITHETHO, NEMIGOMO YOKUPHATHISWA KWE-WEBSITE YAMANZI YAKHO OKUQHUBA NGEMIHLANGANO YAKHO INGXENYE KUTSHINTSHA NGAPHAKATHI ISAZISO. NGOKUTHUTHUKISWA KULO SITE UYAVUMELANA NEMITHETHO, IMITHETHO, NEMIGOMO.
Ngokufinyelela kule webhusayithi, uyavuma ukuboshwa yiMigomo Nemibandela Yokusebenzisa, yonke imithetho kanye nemigomo esebenzayo, futhi uyavuma ukuthi unesibopho sokuhambisana nanoma yimiphi imithetho yendawo efanele. Uma ungavumelani nanoma yimiphi yale migomo, awuvunyelwe ukusebenzisa noma ukufinyelela kule sayithi. Izinto eziqukethwe kule webhusayithi zivikelwe ngumthetho we-copyright nomthetho wokuhweba osebenzayo.
I-2. Inqubomgomo yokuthumela
UKUSEBENZISWA KWEMDOMESTIC (US oda kuphela)
Sithumela yonke imiyalo nge-United States Postal Service (www.USPS.com)
Ngoba wonke ama-oda abekwe e-United States sicela uvumele Izinsuku zebhizinisi ze-7-9 kusukela ngosuku lokukhokha okuzo ukuthola iphakheji yakho (amavikikiki namaholidi awabalwa njengezinsuku zebhizinisi). Lokhu kuphela ukulinganiswa okusekelwe ezikhathini zokuthumela ezijwayelekile futhi ngakho-ke kungenzeka ukuthi kube yisikhathi eside noma esifushane kunezinsuku zebhizinisi ze-7-9.
Isikhathi sokucubungula izinsuku ezingu-5-6 Ukuthumela yizinsuku ezingu-2-3 eziholela ezinsukwini ezingu-7-9 zebhizinisi. Lokhu kuphela ukulinganiswa okususelwe ekuhambeni kokuhamba kwesikhathi kanye nokucubungula izikhathi futhi kungenzeka kube isikhathi eside noma esifushane kunezinsuku ze-7-9 ezibalulwe.
Uma uyala ukuvalwa noma noma yimaphi amasevisi esiwahlinzeka ngalo i-ETA izoba isikhathi eside kunokushiwo.
Afro I-Kinky izodinga isikhathi esengeziwe sokucubungula.
Ngesikhathi seholide nokudayiswa / izinsuku zokuphromotha ngokuvamile kuvame ukuhweba usuku lwebhizinisi le-1-3 ekusetshenzisweni ngenxa yemali enkulu yama-oda.
Izinombolo zokulandelela zizothunyelwa kuwo wonke ama-oda ngemuva kwesikhathi sokucutshungwa okuvunyelwe.
Izandiso Zezinwele Zami Zemvelo azikho obhekene nanoma yimiphi amaphakheji alahlekile noma eyebiwe enkambisweni yokuthumela. Asibuyiseli abathengi nganoma yiziphi amaphakheji alahlekile noma abiwe ngenxa yezimo ezingalindelekile ezivela kwi-My Natural Hair Extensions control. Uma ungathanda ukungeza umshuwalense esikhwameni sakho sicela ushayele noma usithumele i-imeyili ngaphambi kokuthi ubeke i-oda lakho.
Sicela ubeke umyalelo ngosuku oluzokunika isikhathi esanele sokuthola i-oda lakho ngaphambi kokuqokwa kwezinwele zakho. Isikhathi sokucubungula asikwazi ukuhanjiswa noma ukuchazwa. Noma kunjalo isikhathi sokuthumela singaboniswa.
IZIMALI ZEZEMHLABA (wonke amazwe ngaphandle kwe-US)
Ngoba wonke ama-oda afakwe kwamanye amazwe sicela uvumele izinsuku ezingu-5-6 zokucubungula futhi sizothumela inombolo yokulandela ngokulandelana kwakho. Isikhathi sokuthumela sizohluka nendawo ngayinye.
Ama-oda azothunyelwa nge I-UPS (www.UPS.com) Izindleko zokuthumela zihluka nendawo ngayinye.
Ukuthumela kungabuka ku-20 $ - $ 65 yemiyalo yamazwe ngamazwe.
Asikho obhekene nanoma yimaphi amaphakheji alahlekile noma asebiwe kwinkqubo yokuthumela. Asibuyiseli abathengi nganoma yiziphi amaphakheji alahlekile noma abiwe ngenxa yezimo ezingalindelekile ezivela kwi-My Natural Hair Extensions Control. Uma ungathanda ukungeza umshuwalense esikhwameni sakho sicela ushayele noma usithumele i-imeyili ngaphambi kokuthi ubeke i-oda lakho.
I-3. Inqubomgomo Yokubuyisela Imali
Izinto ezenziwe ku-MyNaturalHairExtensions.com zinikezwa "njengoba kunjalo". Asazi ukwenza iziqinisekiso, ezichazwe noma ezichazwe ngakho futhi zilahla zonke ezinye iziqinisekiso, kufaka phakathi kodwa ngaphandle kwemingcele kuzo zonke iziqinisekiso eziqinisekisiwe. Ngaphezu kwalokho, i-My Natural Hair Extensions Co. ayivumeli noma yenza noma yiziphi izethulo eziphathelene nokunemba, imiphumela, noma ukuthembeka kokusetshenziswa kwezinto ezikuyobhusayithi ye-intanethi noma okunye okuhlobene nezinto ezinjalo noma kunoma yimaphi amasayithi axhunyiwe kule sayithi.
Izinto ezivela ku-MyNaturalHairExtensions.com zingabandakanya amaphutha ezobuchwepheshe, we-typographical, noma wezithombe. Asichazi noma sisho ukuthi noma yiziphi izinto ezikulesi siza ezinembile, eziphelele, noma zamanje. I-Hair Natural Extensions Co ingenza izinguquko ezintweni eziqukethwe kule webhusayithi kufaka nemigomo nemibandela yayo, inqubomgomo yokuthumela, inqubomgomo yokubuyisela noma nini ngaphandle kwesaziso. Nokho, asizibophezeli ukuvuselela izinto. I-Hair Natural Extensions Co. ingabuyekeza le migomo yokusetshenziswa kwewebhusayithi yayo nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuthi uboshelwe inguqulo yamanje yale Migomo Nemibandela Yokusebenzisa.